dagaalo culus ayaa saaka kadhacay qaybo kamid ah gobolka gedo iyo isgaadhsiinta ceelwaaq oo lajaray
dagaalo culus ayaa saaka kadhacay qaybo kamid ah gobolka gedo iyo isgaadhsiinta ceelwaaq oo lajaray Posted by By Dalweyn Media at 21 April, at 12 : 11 PM Print DALWEYN waxaa saaka aroortii dagaal culus kadhacay qaybo kamid ah g/gedo kaas oo udhaxeeyay ciidamada dawlada kmg iyo kuwa kenya oo iksu dhinac ah iyo kuwa xarakada alshabaab dagaaladaas ayaa lagu soo waramayaa in ay kasocdaan deegaano ay kamid yihiin degmaad ceelwaaq ee g/gedo.
dagaaladaas ayaa kasoconay maalinkii shalay iyo xaly halkaa kasocday iyadoo wararka hada aan helaynana ay sheegayaan in dagaalkii mar labaad dib uu uqarxay.
ilaa iyo hada lama oga wax khaasaara ah oo kasoo baxay dagaaladii shalay iyo maanta halkaa kadhacay dagaanadaas ayaa sida lagu soo waramayaa in ay badi gaadheen dhinacyadii halkaa kudagaalamayey ee alshabaab iyo ciidamaad dawlada iyo kuwa kenya oo isku dhinac ah.
dhianaca kale waxaa lagu soo waramayaa in isgaadhsiinta degmada ceelwaaq in ay hada hawada kamaqantahay kadib markii shalay dagaal culus uu halaka kadhacay waxaana jarista isgaadhsiintu ay saamayn wayn kuyeelatay dadka kudhaqan degmadaas.
ugu danbayntii isgaadhsiinta jaristeeda ayaan hada la,ogayn waxa ay kumaqantahay waxaana laga cabsi qabaa in dagaaladaasi ay kusoo fideen dhinaca degmaad ceelwaaq kadib markii shalay uu dagaal halkaa kadhacay.
wixii kasoo cusboonaada dagaaladaas waxaad ku,arki doontaan wararkayaga danbe hadii eebe raali kanoqdo.
Maqaalo iyo Tahniyad News Somali News « Previous